Donald Trump oo Kim Jong-un ugu yeeray “hogaamiye weyn” shirwaynaha ka socda Hanoi – Walaal24 Newss
Donald Trump iyo Kim Jong Un ayaa bilaabay shirkooda labaad ee Hanoi, iyadoo madaxwaynaha Maraykanka uu ugu yeeray dhiggiisa North Korea “hogaamiye weyn” wuxuuna bixinayaa si uu uga caawiyo dalkiisa mustaqbal wanaagsan.
Labada hoggaamiye ayaa isa soo wada jeestay, iyagoo gacmaha is qabsaday horaantii dariimadood ee Maraykanka iyo Waqooyiga Kuuriya, oo ku yaal hotelka Metropole ee magaalada, oo ku yaala meel u dhow isku midka ah kulankoodii ugu horeeyay, siddeed bilood ka hor Singapore.
Hadalka uu la yeeshay saxaafadda, Trump ayaa ku naqdiyay naqdiga in shirkii ugu horreeyay uusan ku noolayn sheegashadiisa aheyd in ay ahayd guul wayn oo keeni karta in hubka Waqooyiga Kuuriya iyo joojiyo hanjabaadda nukliyeerka ee waddanka.
“Waa sharaf inaad la socoto Guddoomiyaha Kim. Waa sharaf aad uwanaagsan tahay in aan wadajir u nahay wadankeena, Vietnam, halkaasoo ay ku qoranyihiin roogga gaduudka oo ay aad u sharfeen in ay nagu hayaan, “ayuu Trump u sheegay saxafiyiinta markii labada nin ay wada fadhiisteen midba midka kale ka hor wadahadal hordhac ah.
“Way fiicantahay inaad kula joogto. Waxaan qabnaa shirkii ugu horeeyay ee aad u wanaagsan … Dadka qaar ayaa jeclaan lahaa in ay sii socdaan, laakiin waan ku qanacsanahay. Waxaad ku qanacsan tahay. Waxaan rabnaa inaan ku faraxsanaano waxa aan sameyneyno. ”
“Waxaan qabaa in shirkii ugu horreeyay uu ahaa guul weyn,” ayuu madaxweynuhu ku daray. “Waxaan u maleynayaa inuu middani rajeynayo in uu noqon doono mid ka siman ama ka weyn kii hore. Waxaan sameynay horumar aad u badan … waxaan qabaa in horumarka weyn uu ahaa xiriirkeenna, taas oo ah mid dhab ah. ”
Kacbada ayaa sii waday qaabka uu u socdey tan iyo markii uu ku sugnaa Singapore, taas oo ahayd in uu xajiyo Kim iyo inuu sii wato rajada weyn ee barwaaqada Waqooyiga Kuuriya haddii uu isku raacay in hubka laga dhigo.
“Waxaan u maleynayaa in dalkaagu uu leeyahay awood dhaqaale oo wayn – aan la rumaysan karin, aan xad lahayn. Waxaan u maleynayaa inaad mustaqbal fiican u yeelan doonto wadankaaga – waa hogaamiye weyn. Waxaan rajeynayaa inaan daawado inay dhacdo oo ka caawiso inay dhacdo. ”
Qodobkiisa kowaad, Kim ayaa soo celiyay amniga, isaga oo sheegay in “run ahaantii uu rumaysan yahay in shirkan guulaysta uu yahay go’aan adag oo geesinimo leh” Trump “.
“Tan iyo markii ugu dambeysay ee aan la kulannay, waxaa jiray qaar si qaldan u fahmay xaaladaha iyo colaadaha horay loo soo maray, laakiin waxan ka adkaannay,” ayuu yiri Kim, isagoo intaa ku daray: “Sabab badan ayaa loo baahan yahay.”
Ka dib daqiiqado yar oo wadahadal gaar ah, labada hoggaamiye ayaa casho sharaf ah u fadhiistay hoteelka munaasabada yar oo lala yeeshay xog-hayaha Maraykanka, Mike Pompeo, iyo gudoomiyaha Aqalka Cad ee Mick Mulvaney. Kim ayaa la socday Kim Yong-chol, oo ah guddoomiye ku xigeenka xisbiga talada haya ee Waqooyiga Kuuriya iyo wasiirka arrimaha dibedda, Ri Yong-ho.
Trump ayaa sheegay in wadahadalada muhiimka ah ee shirku ay dhici doonaan Arbacada, waxaana la saadaaliyay inay jiri doonto shir saxaafadeed ah markay dhammeeyaan.